Faah faahin:- Dagaal muddo kooban socday oo ka dhacay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal muddo kooban socday oo ka dhacay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal muddo kooban socday oo deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan ku dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo dagaalyahanadda Al-shabaab, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalka ayaa la sheegayaa inuu yimid, kadib markii dagaalyahanadda Al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig ay ciidamada Itoobiya ku leeyihiin degaanka Halgan ee gobolka Hiiraan.
Qaar kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyagoona dagaalkaasi ku tilmaamay midkii ugu cuslaa ee ka dhaca deegaankaas.
Illaa iyo haatan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaas, balse warar hordhac ah oo aynu ka heleyno dadka deegaanka Halgan ayaa inoo sheegaya inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirta oo soo kala gaaray ciidamadii deegaankaasi kuwada dagaalamay.
Si kastaba ha ahaatee, deegaanka Halgan ayaa ka mid ah deegaanada ku yaalla gobolka Hiiraan oo ay ku sugan yihiin ciidanka Itoobiya, waxaana deegaankaaasi dhawaan dib u qabsaday ciidanka Itoobiya kadib markii halkaasi ay si iskood ah isaga baxeen dagaalyahanadda Al-shabaab oo hore ugu sugnaa.